Firmware, husiku hunopfuurira | Kubva kuLinux
diazepan | | GNU / Linux, Zvimwe
Mwedzi mishoma yapfuura ndisati ndanyora pano, ini ndakanga ndatanga kuita semunyori pane blog yaFrannoe. Imwe yenyaya dzekutanga dzandakaita dzakadaidzwa "Firmware, inotyisa yekutanga". Ino ndiyo nguva yekunyora chitsauko chechipiri.
Nguva pfupi yapfuura ndakaverenga nhau dzezvirongwa Stefano Zacchiroli (Debian mutungamiri weprojekiti) kuitira kuti pakupedzisira Kugovaniswa kwepasirese pakati pechinyorwa chekugovera chinokurudzirwa neFree Software Foundation (pamwe nezvipo zvinoratidzira kuchamhembe seTrisquel, Blax, gNewSense, Venenux, Musix uye Dynebolic). Muchokwadi, runyorwa rwekutumira rwakavhurwa kwaunogona kutanga kutaura nezve chero zano rakabatana. Pasina mubvunzo kutaura, kukakavara kwatotanga: kuti maFSFist anoda kupedza zvisiri zvemahara, izvo zveDebianites zvinoti izvi zvinotyora chibvumirano cheDebian, nezvimwe.
Ini handireve kuenda kunopesana neavo vanofunga kuti Debian anokodzera kuverengerwa mune runyorwa rwekugovera kunokurudzirwa neFSF (kunyangwe ichingoshandisa iyo huru yekuchengetera), asi ini ndoda kusimbisa chimwe chinhu. Izvo izvo FSF zvine hanya nazvo Debian hakusi kungochengetedza kweanopa uye asiri emahara marekodhi, asi zvakare iko kusununguka kwekuti izvi zvinogona kuwanikwa (Zvakareruka sekuita Sudo nano /etc/apt/source.list uye kuwedzera kugovera uye kusasununguka kumagumo kwetambo yega yega.) ESA ndicho chikonzero nei vasingasanganisi Debian. Iine Squeeze uye yayo yemahara kernel ivo vakauya padhuze padhuze, asi kwete padhuze sekuda kweFSF.
Chakanyanya kutsoropodza pane zvese izvi chichava kana zvasvika pakubata neisina-yemahara firmware, icho chinhu chinogumbura chinopinda munzira yekuve nekombuta "100% yemahara" (mahara maererano neRMS). Izvo zvekusasununguka, zvinokumanikidza kuti usarudze pakati pekuve muranda kuchido chakadai sekubatana neInternet kuburikidza neasina waya kana kuve nemifananidzo inomhanyisa KANA KUTI UYE KUTANGA LINUX, kana kubvisirwa izvozvi ………… asi sununguka. Stallman haadi kumhanyisa giraidhi nekuti inongoshandisa iwo desktops kumhanyisa maikirwo emifananidzo (ona pdf kana mufananidzo) asi nguva zhinji anoshandisa koni. Uye haidi kubatana kweWi-Fi sezvo kazhinji yenguva isina mukana weInternet uye inongobatana chete kuverenga nekutumira maemail. (uye kubva kuEmacs)Saka netambo yeEthernet unogona kusevha. Uye nechinhu cheBIOS, Lemote anga amusiya nehana yakachena. Pasina kupokana, kubvisa zvinodiwa kuchaita kuti ukwire nekukurumidza mu Piramidhi raMaslow.
Asi zvechokwadi, isu hatisi tese tine zvakafanana zvido. Ini nerombo rakanaka handidi graphic yekumhanyisa (Ini handifarire kuve nemhedzisiro pachiratidziri, kupfuura conky), asi ini ndinofanira kubatana neinternet kuburikidza neasina waya sezvo paine makomputa matatu mumba mangu (PC nemabhuku maviri emabhuku) uye wifi router iyo inongobatana zvakananga nePC. Kunze kwekudzidzira kwangu kune nzvimbo dzeWi-Fi dzekugona kubatana mu "emergency kesi". Asi pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, ruzivo runonyadzisa rwandaive narwo nharembozha yebhendi yakaita kuti ndive nekudiwa kweinternet yangu yekubatanidza kuti ive yakanaka uye kwete yekugura maminetsi mashoma. Uye nezveBIOS, chinhu chega chandinoona chakakosha ndechekuti inogona kutakura mashandiro esarudzo yangu.
Izvi zvinonditungamira kuti ndibvunze mubvunzo uyo vazhinji vedu watinofuratira: Ndeapi zvikonzero izvo makambani ehurdware anoita madhiraivha GNU / Linux? asi zvakanyanya kukosha Zvakakosha zvakadii izvo vashandisi ve100% yemahara distros vane? Vashandi achida maererano nerusununguko vanoraira chete kutenga Hardware inoshanda ne100% yemahara software, zvisinei nekuita. Ivo vanogutsikana chaizvo kuti kana linuxers akamira kushandisa makadhi NVIDIA, kambani inoshaya sarudzo kunze kwekusunungura vatyairi vayo. Nekudaro, kune njodzi yekuti NVIDIA (sezvakaita Adobe neFlash) zvinoitika kwaari rega kugadzira shanduro dzevatyairi vako veGNU / Linux uye ingozvitsaurira kune vashandisi veWindows neMac (90% kana kupfuura). Ndeapi mamiriro angangoita, ndeapi NVIDIA sununguka vatyairi vako kuti GNU / Linux kana kuvabvisa mukutarisana nekushomeka kwekuda? Uye sekukuudza kwandaita NVIDIA, ndinokuudza chero imwe kambani inogadzira madhiraivha asiri mahara.
Ini handizive chingawane kubva muiyi Debian kuyedza kuyanana neFSF, asi pane kutya kuti kubatana pakati pevaviri kunokonzera vazhinji vashandisi kuti vatame kubva kuDebian chete yemubvunzo weiyo firmware (vachifunga kuti havangadi chero mamwe mapurogiramu epfuma). Muno muUruguay Hardware haina kudhura, sarudzo hadzisi dzakawanda uye vatengesi vanofungidzira izvo hausi prissy maererano nesoftware. Sarudzo yakaipa mukutengwa kwehardware ichaita iyo ruzivo mune 100% yemahara distro a zvisingatsungiririki uye paunokumbira rubatsiro vanokuudza kusvira iwe. Mhedzisiro: kutambisa mari uye kunzwa kusuwa uye kutadza kwakakura kwazvo ……………………… ..sekunge kuti komputa yako yakabiwa.
Pakupedzisira ndinosiya izvi zvinongedzo:
Mailing runyorwa rwehurukuro pakati peFSF neDebian: http://lists.alioth.debian.org/pipermail/fsf-collab-discuss/
Vhoti yakaparadza hukama: http://www.debian.org/vote/2004/vote_002
Iko kushandiswa kwaStallman's Lemote: http://richard.stallman.usesthis.com/
Saiti yekudzivisa kuora mwoyo: http://www.h-node.org/
PS: Ndanga ndichishandisa Sabayon Linux 9 kubva Chishanu, uye handigone kubatsira asi kushamisika kuti nhare yangu 432b yakaonekwa PAIYO REMAHARA DVD. Izvi hazvina kuitika kwandiri neUbuntu. Ini ndichiri kuziva maitiro ekuisa firmware kubva kunowanikwa kwandaishandisa imwe kugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Firmware, husiku hunopfuurira
Mazuva mashoma apfuura ndakanzwa nezve iyo Debian "kuyananiswa" kuyedza uye ini zvakare ndakatya zvishoma kuti vaizoita chimwe chinhu kupenga ne "zvisina-mahara" zvinyorwa.
Mupfungwa iyoyo, ini ndinofunga kuti mutemo waDebian unopfuura kubudirira kugutsa parutivi. Kune avo vanoda 100% yemahara yekugovera, vanayo ipapo uye chero munhu anoda / anoda isiri yemahara software kuti aite giraidhi kadhi basa, wifi kadhi kana chero, zvakare iinayo ipapo, havamanikidze iwe kushandisa proprietary software kana ivo vanozvisiya Icho chinzvimbo pane "kwazvakarerekera" chinzvimbo, saka munhu wese akasununguka kushandisa iwo marekodhi kana kwete.
Kubvisa zvinopihwa uye zvisiri zvemahara marekodhi kungowana iyo "FSF Yakatenderwa" tag inoita kunge kukanganisa kwandiri uye ndinovimba kuti ivo vachaita izvo zvavagara vachiita naDebian uye voenderera mune imwecheteyo tsinga. Zvichida izvo kana iyo FSF ichapengenuka uye ivo vanosvika chibvumirano (kunyangwe ini ndisina chokwadi kuti gehena rakagwamba pamusoro kana matatya atanga kutamba flamenco).
Ini ndaive kumusangano wakapihwa naRichard Stallman mutaundi rangu, (Viedma, Rio Negro, Argentina)
Uye ini ndakacherekedza kuti mukomana uyu anonyanyisa .. Uye kunyanyisa kunogara kwakaipa .. Pane PC yepamba, yemahara uye yeprogrammes software inogona kugarisana murunyararo.
chaizvo. Ini ndinobvumirana 100% newe pane iyi nyaya. munyika yakanaka, paisazove neyemvumo firmware, asi munyika chaiye, iye Stallman anoita seanoramba kuona, hazviite. Ini pachangu handidi kubayira kunyaradzwa kwandinopihwa naChakra, ndichiziva zvese nekukasira, kungofunga kwakanyanyisa.
Zvinondinetsa kuti vanhu havana chiono. Vanababa, idzo pfungwa dzakanyanyisa, nekuda kwekuvapo kwavo ndezvekuti nhasi tine zvakawanda zvinonakidza uye zvakavhurika zviitiko. Ini handizive kana iwe waona kuti, semuenzaniso, aya mazano akaomarara anochengetedza mitauro yakawanda yekuronga yakavhurika uye yemahara, senge HTML5 standard. Kuti idzi pfungwa dzakakomba hwaro hwechinhu chose, ZVESE zvemahara software uye izvo, kunyangwe zvingave zvakaomarara uye zvisingaite kune vashandisi vega, ndiyo mbeu yekushandira pane mazano ari nani.
Ruremekedzo rwakawanda mupfungwa iyoyo, usamise zita rekuti stallman nemafungiro ake sevanyanyisa kana vanonyanyisa nekuti kune zvikonzero zvakawanda mune izvo zvaanotaura, asi tarisa izvo stallman anotaura nezve dzidzo uye mahara software uye undiudze kana ari radical uye ari kwete kurudyi uye huremu munharo dzavo.
Usanditore semunhu akatsamwa, ini ndinongoda kujekesa kuti ivo havangova chete pfungwa dzakanyanya asi ivo vane poindi yavo.
nano pane iyo poindi +100
Radicality ndiyo nhungamiro inoitwa zvinhu zvikuru. Dai taigara tichiti "zvakanaka, takagamuchira izvi kubva ipapo uye izvi kubva pano" hapana kwataizoenda. Zvakafanana nekufunga Gandhi achizvibvumidza nguva nenguva kutyora misimboti yake uye kuramba achitsigira nheyo dzeRunyararo. Ndinovimba uye munharaunda huru yeGNU / Linux tinozvibvumira kufunga pamusoro pebasa rakakura rakaitwa naStallman (pamwe nekubudirira nezvikanganiso), mukutsvaga nyika ine hunyanzvi.
Zvinonditsamwisa zvikuru kuona kuti Stallman anotsoropodzwa sei kubva pane zvakaitika kwaari (ini ndinoshandisa yakadaro distro iyo isiri yemahara, uye inoshanda kwandiri). Chinangwa chake chinoenda kune rimwe divi, uye kana pakave nezvakaitika maererano nerusununguko uye kuvhurika kwemakomputa, izvo zvave chaizvo nekuda kwekugadzwa kwemitemo yakajeka uye yakasimba inobvumidza kusimudzira nekugadzirisa mashandisiro emahara matekinoroji. Chinangwa chaStallman nderimwe divi raanoshoropodzwa.
Zvakanaka zvataurwa, Nano.
Yakajeka nano "Zvinondinetsa ini kuti vanhu havana chiratidzo."
Handifunge kuti yakanyanyisa kana kupenga lol. Izvo Richard zvaari kufunga ndezvekuti "Hakuna miganho."
@Digital_CHE «... ndanga ndiri kumusangano wakapihwa naRichard Stallman mutaundi rangu, (Viedma, Rio Negro, Argentina) ...» che Viedma ndiro guta guru redunhu, yaive guta guru renyika. Kana iwe ukati taundi iro Maquinchao chelforo raenda, iyo Cervantes mencos, nezvimwe. Viedma iguta (ini handisi weViedma). ndine urombo nekuda kwemusoro.
Pamusoro penyaya yeunyanzvi.
ivo vanhu vefsf vakakanganisa pane zvakakosha pakurwisa debian.
Ramba kuvapo kwesoftware, kana kudzivirira kushandiswa kwayo. Icho chiremera. Iko kunofanirwa kuenzana kana kuipa kupfuura makambani ane yavo software yekudyara kana vasina chavanoedza kudzivirira kana kuisa zviremwaremwa muvhiri kuti zvishandiswe zvemahara software.
Ini ndaizotaurira FSF Yakarambidzwa Ban
Yemahara software inofanirwa kusvika kuvanhu nezvikonzero zvechivimbo kwete zvekumanikidza.
Debian is a distro iyo inorarama zvechokwadi kune mweya wemahara software, ichipa yechokwadi yemahara proprietary software inoshanda sisitimu. asi haidziviriri kana kudzora mushandisi kuwana software yeimba. nekuti sarudzo iyoyo inongoenderana nemushandisi.
Santiago Caamano Hermida akadaro
Pasina chinangwa chekugumbura chero munhu uye nekuremekedza maonero a «Mr. Ricardo ", wakasununguka kuisa chero chaunoda pamakomputa ako, ingave iri yemahara kodhi kana kwete.
Ini pachangu, handina kana chinopesana nevanotyaira, uye ndinotenda kuti makambani akaita saBroadcom, Nvidia, nezvimwe, vane kodzero yavo yakakwana yekuvagovera pavanobuda mumhino, ndosaka vari avo.
Kana Debian akagovana navo, nekurembedza menduru yeFSF, zviri nyore sekuenda kune imwe distro kuti kana vakaishandisa uye chinhu choga chinovaudza kunze kwemenduru ndiko kurasikirwa kwequota yevashandisi.
Pindura Santiago Caamaño Hermida
Iyo poindi ndeyekuti munhu wese anoona Stallman semunhu anonyanyisa uye, kunyangwe ari iyewo, nekutenda kwaari tine zvinhu zvakawanda mune yemahara software seGPL.
Dambudziko apa nderekuti kunyangwe iwe wakasununguka kusarudza kuti ndeipi sisitimu uye software yaunoshandisa, dzimwe nguva rusununguko irworwo rwunoshatiswa nekuti unopedzisira wasarudza kuzvivharira mukeji nekuda kwe "yako yekuzvisarudzira" iyo inopedzisira yaita isingabatsiri ... Linus Torvalds pachake akataura kudaro (uye kuti iye anonyanya kuoma uye ane chokwadi kupfuura stallman) ramangwana renyika isourceource, uye akarurama; vanhu vazhinji uye vazhinji vanoona kuti vanoda kuziva kuti zvinhu zvavo (software) zvinogadzirwa nei uye mazuva ese vanhu vari kuwedzera kubatikana netekinoroji; Hatisi panguva iyoyo iyo software yaingova yeinjiniya chete kana iyo yakazouya gare gare mairi yaizongoshandiswa chete, ikozvino kune vamwe vanhu vazhinji vanodzidza zvemacomputer sainzi kana vakatoberekwa vaine iyo tarenda uye vanoda ziva nezvazvo izvi ndezve zvese, zvese kusataura kuti zvinobatsirawo ...
Kuti Nvidia Broadcom na blah blah vari kurudyi kwavo? Hongu.Kuti sarudzo yako yemahara inogara yakanaka? Zvakanaka udza izvozvo kuna Nvidia apo nekuda kwekusada kuburitsa madhiraivha avo vakarasikirwa nekontrakiti yekutanga yemamiriyoni gumi emachipisi eChina, avo vakapedzisira vaita madhiri nemakwikwi; zviripo, rusununguko rwavo rwekugara rwakavharwa rwakatora chibvumirano chikuru.
Kana ini handitsigire iyo Debian inoda kuzvidaidza yega 100% yemahara software, chekutanga pane vese ivo vanofanirwa kufunga nezve vazhinji vashandisi vavanayo, vanoshandisa iyo isiri yemahara firmware kumutsidzira zvekare MAC's, rangarira kuti iyo inoshandiswa zvakanyanya distro pa sevha uye kuti Mukufamba kwenguva, ivo vari 100% yemahara mukutsanangurwa kwechirevo sezvo ivo vasingasanganisi chero chinhu chinobhadharwa nekutadza uye izvi zvinoita kuti mushandisi ave nesarudzo yekuti kana kwete. Ini handioni kukosha kweFSF kubvumidza izvo.
Izvo zvinoita kuti ndinetseke kuti ko iyo yakavhurwa sosi software kufamba yakange yazvarwa pamberi pemahara software kufamba?
Pamwe isu takave neakanyanya kutemerwa kumberi kana ndiani anoziva ... icho chinhu chakaoma kufungidzira xD
Ini ndinobvumirana ne @Santiago, kunyange ini ndichifunga kuti kurwira mahara distros kunofanirwa kuenderera.
Icho chokwadi chekuti isu tinopedzisa vashandisi hachikanganisa isu zvakanyanya, hazvireve kuti mune ramangwana zvichave zvakadaro. Kuve nezvose zvakasununguka (mupfungwa yerusununguko rwune) Hazvizoregi kuve zvakakosha, ndiko kuti, handifunge kuti "kuzorora pane zvatinowana" nekuti chimwe chinhu chinopihwa pachivande chakarurama. Kune uyo anoedza kuona kuti zvese zviri Mahara, kunyange hazvo hongu, chinhu chimwe ndechekuzvida, uye chimwe kuzviratidza nekuti chimwe chinhu hachipiwi pachena.
Ini ndinofunga zvakapusa… zvese zvakanyanyisa zvakashata.
Uye zvakare, mushandisi ndiye ANOFANIRA kuve nemukana wekusarudza.
Debian anofanirwa kuenderera mberi nekupa sarudzo yekushandisa yemahara mapakeji chete, kana kushandisa asiri-emahara zvakare.
Ndiko kuzviona kuri nyore.
Kana izvi zvikarega kuva seizvi, chichava chimwe chezvinoodza mwoyo zvangu zvikuru 🙁
Daniel Rojas akadaro
Idem kuna Marcos, iwe wakawana pfungwa dzangu zvakanaka.
Chokwadi ndechekuti, ndinogonawo kunyadziswa kana Debian akaita izvozvo, ndakaedza akawanda ma distros uye ndiyo chete iyo yandinonzwa kugadzikana zvakakwana ne 🙁
Pindura kuna Daniel Rojas
Ndinofunga wawana zvandaida kutaura zvakanaka.
Zvakanaka kana zvirizvo, kutama kwevanhu vazhinji kuenda kunzvimbo yeFedora, Sabayon, Arch, Cjakra ichave nyanzvi 🙂
»Kuno kuUruguay Hardware haina kudhura, sarudzo hadzisi dzakawandisa uye vatengesi vanofungidzira kuti hausi mupopota maererano nesoftware. Sarudzo yakaipa mukutengwa kwehardware ichaita kuti ruzivo mu100% yemahara distro isingatsungiririki uye kuti kana iwe uchikumbira rubatsiro ivo vanokuudza kuti uzvihure iwe »
Ichokwadi ndechekuti zvakaoma kwazvo kuwana PC ine 100% yemahara Hardware, kana zvisingaite zvisingaite, kutsvaga PC yakaita seizvi kuchakutorera nguva yakawanda (uye pamwe) mari yakawanda kupfuura yakajairika.
Mukupedzisira, chii chinokurudzirwa kune akajairika mushandisi (uyo ane hupenyu hwemagariro, anobatana neinternet kuburikidza ne-wi-fi, kana ane smartphone) ndeye GNU / Linux distro ine zvinhu zvakavharwa, kana iwe uchida chiitiko chinogutsa zvishoma. nePC yako.Uye ndicho chikonzero iwe uchave uri mutirongo, kana kuti hausi kuzokwanisa kugadzirisa chero chinhu, pane zvinopesana, zvese zvinogona kuitwa mune chero distro, yemahara kana kwete, nekuti ivo vese tevedzera huzivi hwakafanana uye rega utore matomu eiyo system inoshanda, kana uchida uye kana uchiziva kuti sei.
PS: Diazepan, ini zvakare ndine Sabayon 9 yakaiswa, mune yayo KDE vhezheni, uye ini handichinje iyo imwe 😉
1) Yangu iri neXfce
2) Mu h-node vanonyora mabhuku ekunyorera anoshanda ne100% yemahara software.
Ndatenda zvikuru nekuda kwewebhu, ini ndaifunga kuti paifanira kuve nechakadai, asi kusvikira zvino ndanga ndisati ndachiwana, zvichandinakira kana rimwe zuva ndichida kutenga 100% yemahara PC uye ndinoida kubva chiratidzo.
Kunyangwe ini ndaona kuti mamodheru anoenderana zvizere angave ekare kwazvo uye haasisina kutengeswa, kana iwo mamodheru nyowani haanyatsoenderana (kazhinji, iyo wi-fi kadhi haishande, zvichave nekuti vazhinji vanobva kuredcom) kana ivo vane Hardware yakashata kwazvo.
Ini ndinotenda kuti kuyera kukanganisa kweLinux uye zvishandiso zveGNU kubva pane chete maonero eiyo distro yevashandisi vekupedzisira kwakanyanyisa 😀 Ini ndinogovana huzivi hwe100% yakavhurwa sosi, ndozvazvakaita uye ndiyo nzira yazvinofanira kuenderera kuvapo.
Iye zvino vatyairi vanezvivakwa mune mamwe madhizaina inyaya yakaoma 😀 asi nekukurumidza kana gare gare ivo vanofanirwa kupa nzira, Linux / Gnu inowanikwa mumidziyo mizhinji mazuva ese.
Zvino nezve yakavharwa software, ndeimwe nyaya isingafadzi 😀
Chimwe chinhu chakanaka uye ini ndinoremekedza zvikuru munaVaStallman vanorarama nenzira imwecheteyo yaanotaura, iyo inomupa kodzero yekukurudzira kushandiswa kwemaitiro akasununguka zvachose.
Chinhu chandisingagovani zvachose ndechekuti kugona kwevanhu kusarudza kushoma.Ini handidi kuti software yevanobhadhara inyangarike, ndinoda software yemahara yekuparadzira uye kuwanda pamusoro peyako nekuda kwehunhu hwayo nekushanda kwayo pasina anomisikidza chero munhu.
Mune dzakawanda zvemashoko chirevo chinoti "zvese zvakanyanyisa zvakashata" zvinorangarirwa, kana tikatarisa zvishoma pane nhoroondo yevanhu tichaona kuti zvinonzwisisika zvakadii.
@ Tavo "Mr. Stallman anorarama nenzira yaanotaura"
Kutanga ini ndinojekesa kuti kwandiri Stallman inodiwa asi semuenzaniso zvimwe zvinyorwa
- Haashandise nharembozha asi kana achizoida, anobvunza chero ari padyo kuti agone kufona
- Anogamuchira rubatsiro kubva kuhurumende, zvinoshamisa nyika imwechete iyo yaanozviramba kubva kwaari kuti anoda kuongorora nekutitonga (izvo zvandinogoverana naye)
Uye chii chakanyanya kukosha kwandiri, kushaya kwemaonero.
Izvo iye nevamwe purist gnu / linux vashandisi zvavanoda ndezvekuti iwe uve wakasununguka kushandisa CHETE zvemahara software, asi zvinosuwisa kuti yemahara software ine zvakawanda zvinokanganisa uye inoda ruzivo rwakakwirira zvakanyanya rwecomputer sainzi uye zvakadaro ivo vanozviona zvakanaka.
Ini ndinofinhwa nekuverenga vashandisi ve linux vachishoropodza vamwe vashandisi ve linux nekuti ivo vanongoda kushandisa system uye kwete kudzidza chero chinhu nezvekuti inoshanda sei mukati uye blah blah blah.
Kutevera iyi nharo isina musoro ndinozvibvunza ini, semuenzaniso: iwo maTaliban akafanana anoziva nezvemota makanika kuti vazvigadzirise ivo, nekuti fungidzira kuti unoenda nayo kumakanika uye anoisa sikuruvheti patent nekambani X uye haina-yakasununguka patent sikuruwa.
Iye zvino wedzera makanika kune zvese zvaunoshandisa / zvaunodya muhupenyu uye iwe uchaona kusava nebasa kwekupokana.
@Oberost ndanga ndisingazive zvaunotaura nezvaStallman, ndinobvumirana zvachose nekomendi yako zvakadaro.
Hapana mubvunzo kuti Stallman anodikanwa uye hapana anoramba zvese zvaakaita uye anoramba achizviitira zvemahara software, asi ini ndinofunga kushivirira chinhu chikuru, icho Stallman, vagadziri vazhinji nevashandisi veGNU / Linux vasina
Kana Debian akaterera kuFSF nekudzikisira ayo asiri emahara zororo, zvinenge zvichitora nhanho hombe kumashure kwete kuenda kumberi. Ini ndinofunga kune kushomeka kwerusununguko izvo zvakare zvakakosha: "Rusununguko rwekuisa chero chaunoda."
Kuzviisa neimwe nzira, kana mumwe munhu akakuudza, Usaise izvo nekuti izvo zvinokutorera rusununguko. Haasi iye munhu ari kunditorera ini rusununguko rwangu rwekusarudza?
Zvisinei hazvo Debian: iwe wakanaka seizvi, ndinofunga unopa rusununguko rwakawanda rweichi chokwadi chekuti kana iwe uchida yemahara sisitimu iripo, asi kana iwe uchida kushandisa matura ekushandisa, iwo aripo.
Unogona kudzidza zvakawanda zvakanaka kubva kuna Stallman, asi unofanira kudzidza kuzvisarudza.
Tarisa, zvinoenderana nezvandakasangana nazvo (uye sezvo ndisiri iye akasarudzika ndinofungidzira izvo zvevamwe vazhinji vakomana nevanhuwo) zvine mutsindo chaizvo kuti vanofanirwa kutsauka parutivi rusina rusununguko zororo. Ini ndinofungidzira (zvinoita sekunge kwandiri) kuti kuchengetedza izvo zvisiri-zvemahara zvinoshandisa zviwanikwa uye zvinoshanda kubva kuvanhu vanogona kupira ruzivo rwavo kunatsiridza yemahara chikamu cheiyo distro. Ini zvakare ndinofungidzira kuti makambani anobatsira debian kune avo vega zvinangwa uye nekuchengetedza yavo software mune isina-yemahara zororo zvisina kunangana kubatsira mahara software. Pano panofanira kunge paine nyonganiso chaiyo. Mari nezvivakwa.
Pandakapinda mukukanganisa, nekuda kwekuremekedza pamwe ruzivo rwevamwe vakomana uye "mabloggi"; uye nekuda kwekusaziva kwake, akasarudza kurongedza zvinopa uye zvisina-kusununguka mune sosi.list.
Yakanga iri mushure mekanguva kadiki uye nekuda kwemukati, kugutsikana kwakazara kuti ini handina basa nekuyedza iyo system pasina iyo isina-mahara. Ini ndaitarisira zvakanyanya nezve yemahara software idealogy pane kuparadza kuisirwa pc yangu. Saka ndakaona kuti pc yangu yakashanda zvakanakisa pasina iwo zororo (izvo zvinofanirwa kusimbisa kuvashandisa zvinotyisa pakuiswa kwavo nemubvunzo). Zvakanaka, saka ruzivo rwakawanda nekuverenga zvakatevera, asi ndozvazvakaitika makore matatu apfuura. Ndinozviona zvichishamisa kuti vashandisi vazhinji pano vanofunga kuti hazvina kunaka uye kudzosera kumashure ... Izvo hazvigone kuva setback yekuzvisunungura kubva pahuremu hwemuridzi. Hazvina kumbodzokera kumashure kungo tarisa rusununguko, kunyangwe zvichidhura. Ndinovimba havasi vanodziya mumazano avo sekunyorwa kuno; Nekuti pane nhema medocrity iyo inodzivirira kuchinja nyika! Ndinovimba munguva pfupi ndinogona kuita zvishoma kupfuura kunyora kubatsira uyu anodikanwa distro anoita kwandiri, semuenzaniso wenzanga nehunhu. Kwazisai vanhu. kubva kumaodzanyemba; alunado.
Ichokwadi chiri nyore, "Unofanira kudya" ndechekuti chero bedzi ivo vasingapi nzira dzekushandisa kune software yekudyara havagone kubviswa, ini ndinogara pamakomputa, handiite chero chinhu neicho chandisingakwanise kushandisa.
Takasununguka uye takakosha here? Ini ndinofunga yaive pane ino blog yandakataura nguva refu yapfuura ... ndinonzwa kusununguka zvakanyanya neWindows kuti ndinoiisa pane chero komputa, kuti ini ndinomisikidza chero chirongwa zviri pamutemo kana anarchically, izvo zvinondipa ese maturusi ekushanda zvakanaka .
Stallman's fanatical-extremist stances zvinokuvadza munhu mumwe chete, wekupedzisira mushandisi. Uye kusareruka kureruka kweshoko raTorvalds (fuck iwe Nvidia .i.) Unogona kuva nemhedzisiro mukupedzisira kuti mumwe anongowana iyo hafu… Ehe, iyeye wekupedzisira mushandisi. Iko kusununguka kwekutaura kunotenderwa nekuti havana chavanorasikirwa uye hapana anozvidavirira kwavari.
Chinonyanya kundishamisa ndiko kurerukirwa uko vashandisi veGNU / Linux vanobvuma iwo mazwi uye nekuatsungirira, nekuti Stallman naTorvalds mapurogiramu ekuona, asi rusununguko chairwo runoenda kumberi, rune chekuita nemagariro, uzivi, psychology, anthropology, kirasi kurwira ... Nekuti isu tinorarama munharaunda inotidzora kubva panguva yatinozvarwa uye kushandisa wi-fi hazviite mutsauko.
Kubva pamaonero emagariro… Kana munhu akapindwa muropa nezvinodhaka akapinda munzvimbo yekuvandudza, kurapwa kunotanga nekumupa madosi anodzorwa emushonga, uye nekufamba kwenguva anozotsiviwa ne "zvinowedzera" kudzamara asisina basa nazvo. Mamwe mazwi haana basa.
"Ini ndinorarama nemakomputa, ini handiite chero chinhu chandisingakwanise kushandisa."
wakunda kutsvoda: *
Ini ndinobvumirana zvachose, isu tese takasiyana, isu tese tine zvido zvakasiyana, zvinodiwa naStallman hazvipfuure koni, shandisa semuenzaniso kuti "kana achigona kushandisa 100% yemahara software isu tese", haina kukwana zvachose, chaizvo nekuti isu tese takasiyana
Chimwe chinhu chandaverenga pamusoro apa che @ nano, rusununguko rwekusununguka chero chinhu asi keji, kunze kwehukama hwehukama, ivo vanobva kumatunhu ane hutsinye ayo anotofadza xD
Ini ndinoda yako inoshanda pfungwa, iyo ingangoita isu tese tichigovana ... asi mukuita kwangu zvakaitikawo kuti Linux yakandipa "ruzivo rwekushandisa komputa" iyo Windows haina (uye kunyangwe isingakwanise kunzwisisa kodhi yekodhi). Uye ruzivo ndirwo runotisunungura, rwunotibvumidza kusarudza. Nechikonzero ichocho uye nenyaya dzinotodonha dzoga kana dzakura ndinofunga hatigone kuisa windows. Ndisati ndazviita (zviri pamutemo kana zvisingaite) ini handikwanise kutanga ndamira kutsvaga yemahara mhinduro pawebhu kana pane ino saiti pachayo. Hatichagona kudzokera kumashure, uye hapana chimwe cheizvi chine chekuita nekunzwa "wakasununguka kana chakakosha" (iyi mibvunzo ye egos geeks kana inowanzo dzvanyirirwa). Iri kuita chinhu chakakodzera kusaramba uchirova nyika neupenzi hwepachivande uye marezinesi ehutachiona ayo anongobatira avo vane simba rakawanda. Shanduko iri mune yega yega vedu vakaonda. Iyo tsanga yekusvetwa yejecha, uye iri yega; asi zvakare zvinokuita kuti ufare.
Iri kuita chinhu chakarurama uye ndizvo zvazviri, kuva nerusununguko rwezivo, rwekuchinja, rwekusarudza uye rwekusarudza… Izvi zvinonyanya kukosha kana zvichinge zvakabatana nezvinetso zvakaita sekusaverenga, kushaya zvinovaka muviri, tsika nemagariro, sainzi, nezvimwe. Yemahara software inogona kunyatso kugadzira nyika iri nani.
"Haugone kudzokera kumashure" nekuti iko kushanduka uye kana iwe wakadzidza zvakawanda nezve makomputa kune vamwe vanhu avo nekuda kwebasa ravo kana basa ravo vasina nguva yakakwana yekudzidza kodhi asi ivo vanodzidza chimwe chinhu chakakosha kwazvo, huzivi.
Ini ndinonyatsonzwisisa chinzvimbo chaStallman nekusapa ruoko rwake kuti rimonyorore, mutoro uyo murume uyu anonyanya kukosha kune ramangwana remahara, asi chimiro ndicho chisinganditendise nekuti huzivi hwake hunogona kuvhiringidzwa nemafungiro ekunyanyisa.
Ini ndakadzidza kare kare, iyo -Ii? - yakakosha kupfuura iyo - Sei? - kuzviisa neimwe nzira ... Mangwana, isu tinomuka tonoona nhau dzekuti ma distros ese pasina achinjira kune emahara software nekuita kwete kutsigira yemahara software. yakavanzika. Chii chingaitika kuna GNU / Linux?
OUYA achangoratidza nzira, kana mumwe munhu akagadzira OUYA foni kana piritsi, kana chirongwa cheArm komputa ine firmware uye PUBLIC madhiraivhi pamwe nemamwe MAHARA asina kufanana, asi ndeyekuti muARM mazhinji acho haisi kunyange yeruzhinji nekuda kwekuti haugone kuisa Linaro kana Replicant.
Ndakave nepfungwa yekuti ndiri kugovera, foni kana piritsi ine 4 emukati maUSB kuisa mini USB flash drives, uye kugona kubhuroka kubva kwavari neGNU / linux, Android, tizen, meego kana FF OS distros kuravira, pamusoro pekukwanisa kuve yakachipa, uye kuwedzera kwavo kugona.
PS: SABAYON kwandiri ndiyo yakanakisa distro parizvino, asi ine dambudziko shoma kupfuura ARCH, yayo 1000 Hz kernel iwe uchaifarira zvakanyanya, vagadziri vayo vakangwara, chaizvo, uye kazhinji nguva dzose kana chimwe chinhu chisipo icho chiri muPPA icho uchabvunza here, panguva yacho uye kuti - ini handizive kuti sei - mapakeji mazhinji haaenderane muzita neavo ve debian paunotanga kuumbiridza «zvinhu zvisinganzwisisike» une «basa diki» neanoenderana. Yako XFCE inobhururuka.
Zvinotaridza kwandiri kunge rakanakisa zano nekuti paizove neakanyanya kuzivikanwa distro mune iyo FSF runyorwa uye pane iyo gnu.org peji izvi zvinoreva kukura mukuvandudzwa kwemahara software, uye maererano neHardware Wakamboedza makomputa Dell?.
Hmm, ndinoshamisika kuti ndiani ari kudzingirira stallman? Irori rinofanira kunge riri dambudziko rekuita mukadzi (kungoseka).
Kana chiri chinyorwa ini ndinofunga kuti pfungwa dzaStallman dzakarurama izvo zvakanyanyisa ndiyo nzira iyo vamwe (fsf) vanoda kuzviisa mukuita, uye chikonzero ndechekuti iwe haugone kuita shanduko nenzira iyoyo mune imwe kudonha swoop kana iwe usina iyo kukwanisa kuzviita, tarisa muenzaniso, ndinonyora kubva ku vit vit, kumba kune maviri kuwedzera imwe kubva kuhama yangu, imwe kubva kumukadzi wangu uye iyi yandinotenga kuti ndiishandise uye ndishande, vanayo ne kuhwina (hama yangu yemitambo yake uye mukadzi wangu nekuti anga asina moyo murefu kune linux: b), uye ndinayo ne win 7 uye ubuntu (munguva pfupi kuti ndichinje lol), uye ndinoifarira uye dai ndaive nenhengo dzayo dzese. mahara zvachose, ndingadai ndichiri kuifarira uye mhuri yangu yaisazoisa buts mukuishandisa. Asi zvinoitika zvese zvikamu zvaro ndezve Intel uye bios iri yakavanzika. Saka tingave sei zana muzana pasina kana isu tisingakwanise kutenga zvigadzirwa zvemahara?
Tarisa, ndaida kuziva kuti ndotenga sei laptop senge stallman asi ini ndichafanirwa kuenda kunoshambira kuChina, saka ndinofanirwa kugutsikana nezviripo, pure proprietary. Mukupedzisa, zvakanaka kuti isu tese tiburuke munzira iyo inofungidzirwa naStallman uye neveFSF kuti yakafamba, asi isu hatigone kuzviita kamwe chete, hazvigoneke, vakuru, iri ibasa rehomigas, hongu iyo inokurumidza kuita zvirinani, asi kuzviita kamwe kamwe zvinongotungamira mukundikana.
uye ivo vanofanira? Huye, ivo vanofanirwa kutora zvinhu zvakapusa uye voramba vachidhakwa uye vasingade kuita zvinhu nekurovera, asi panzvimbo pezvo kuzvitarisa muUbuntu. (Ehe, ini ndatoziva kuti zvinobva kune yakasarudzika pati, asi munhu wese anoziva magumo enhau dzavo dzinofadza, ndinoreva kumakiki), iwe unoda kuve wakasununguka zana? Zvakanaka izvo ivo asi zvishoma nezvishoma uye mukuita zvinopa dzimwe nzira isu vashandisi avo pakupedzisira ndivo vanozvara nezvikwata zvedu uye muzviitiko zvakawanda hatizive maitiro (kunyangwe kana iwo anobva kuLinux akatiponesa kakawanda: )).
Kuverenga kunopa kunzwa kwekuti kuti uve nekukasira iwe unofanirwa kuve nemadhiraivha epamutemo, nekuti hazvina kudaro
Ini ndinoshandisa yemahara nyowani mutyairi uye ini ndine kumhanyisa, ndinogona kutamba nexuiz pasina matambudziko, ndine yangu debian 100% yemahara
Uye iro rondedzero yeFSF, nekuti irwo runyorwa chete, ini ndoda kumbodaidza kuti politicking, chingave chii pane kusavapo, kana iwe uchida kushandisa yemahara debian, ishandise uye kana zvisiri, saka aiwa
Izvo zvinotikurudzira isu maDebianist kuti isu kana tiri kwete pane rondedzero?
nzira yekuparadza nguva
Pindura kuna nonanona
v3pawe une moyo wakanaka asi ...
Zvakanaka, pane imwe nguva nekuda kwekushaikwa kweWi-Fi handina kuwana kondirakiti, chibvumirano chakanakisa, mune ruzivo rwangu, vanhu veFSF vanonyanyisa, dai ndaive nedistro nevatyairi chaivo veWi-Fi yangu. kushanda ... kusachema kwakanaka futi.
Chinhu chacho chinofanira kuve nhanho nhanho, zvakasikwa, kutanga kukambaira, kwobva kwafamba wobva wamhanya.
Asi nekuda kwekuti 64 bit firmware haina kugadzirwa, graphic, kuti madhiraivha anotakurwa kwairi, kuti iyo yekuparadzanisa mabasa uye iyo boot loader mabasa eiyo
Ndinoda kukubvunza kana zvichikwanisika kuisa software yekudyara mukuparadzira kweGNU.Ndinofarira Dyne: bolic ... asi, ndinogona here kuwedzera flash, adobe semuverengi wepdf, nezvimwe?
Pindura kuna juancuyo
Simba rinogona kuitwa asi rinofanirwa kuitwa nemaoko ……… ..uye hazvikurudzirwe kana usiri kuda kurovererwa.
Zvakanaka, ini ndoda kusiya windows xp ndoenda ku linux, kana Dyne: bolic yakanyanyisa ndinogona kuisa OpenSuse kana Chakra uye nekuisa software yese yandaida nezve Dyne: bolic, zvinonditorera nguva nekuti handizive linux, asi ichave nzira yekubuda yakashongedzwa pasina kugumbura chero munhu.
Plank: doko re-ultra-light
Axel: Kurodha pasi nechisimba zviri nani pane wget